AT&T: एक उत्तम बिक्री एक विनाशकारी डेलिभरी पछि Martech Zone
शुक्रबार, अगस्त 31, 2007 आइतवार, सेप्टेम्बर 2, 2007 Douglas Karr
जब हामी हाम्रो अफिसबाट नयाँमा सर्ने निर्णय गर्‍यौं, मैले बोलाएको पहिलो व्यक्ति एटी एन्ड टी थियो। हाम्रो फ्याक्स र फोन लाइनहरू माथि थियो भनेर सुनिश्चित गर्नु भन्दा यस कदममा अरू केही महत्त्वपूर्ण थिएन।
केही आवाज प्रोम्प्ट्स पछि, प्रतिनिधिले तुरुन्त फोन उठायो र मैले गरेका प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दियो। उनी खुशी, जानकार, र धेरै सहयोगी थिइन्। हामी शनिबार नयाँ फोन शुक्रबार भित्र जाँदै हिसाब गर्ने निर्णय ग .्यौं। लामो सप्ताहअन्तमा, हामीले सोच्यौं यो फोनमा ढिलो हुनेछ र यसले हाम्रो ग्राहकहरू र सम्भावितहरूलाई असर गर्दैन।
हामीसँग १-1०० नम्बर, रोलिंग लाइनहरूको समूह, समर्पित फ्याक्स लाइन, र हाम्रो सानो व्यापारको लागि व्यवसाय-वर्ग DSL थियो। नयाँ अफिसमा हामीले इन्टर्नेट पहुँचलाई हाम्रो लीजसँग जोडेका छौं किनकि भवनले धेरै ब्यान्डविथको साथ कम्पनीको लागि केही अत्यावश्यक नेटवर्कि equipment उपकरणहरू राखेको छ।
हामी १-1०० नम्बर राख्दै थियौं तर हामी नयाँ फोन नम्बरहरू लिनुपर्दछ किनकि हामी शहरको अर्कै भागमा छौं, त्यसैले हामीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई हाम्रो नयाँ फोन नम्बरहरू बताउन months महिनाको नि: शुल्क मेसेजिंगलाई पुरानो लाइनमा छनौट गर्‍यौं। । हामीले कुनै पनि समस्याको स्थितिमा सन्दर्भ गर्न टिकट नम्बरको साथ कल बन्द गर्यौं।
त्यहि सम्पत्ति समाप्त भयो
हाम्रो कदम भन्दा करीव एक हप्ता अघि, हाम्रो DSL बाहिर गयो। डेढ दिन पछि एटीएन्डटीसँग कुराकानी गरेपछि, यो वचनको साथ कि यो व्यापारको अन्त्य हुनु अघि (अघिल्लो दिन) हुनेछ, हामीले अन्ततः हाम्रो DSL फिर्ता पायौं। आउटबाउन्ड बिक्री टोलीको साथ एक अनलाइन टेक्नोलोजी कम्पनीका लागि कुनै पहुँच बिना बेच्न यो धेरै गाह्रो छ। प्राय सबैले प्रतिक्षा भन्दा घरबाटै काम गरे।
हाम्रो लागि भाग्यशाली, AT&T सँग एक राम्रो उदार प्रतिपूर्ति नीति थियो। हराएको व्यापारमा हजारौं डलर को लागी हामीले हाम्रो बिलमा $ ११ credit क्रेडिट प्राप्त गर्यौं।
आउटबाउन्ड बिक्री टोली बिना बिक्री गर्न को लागी यो अधिक गाह्रो छ फोन। एक दिन पछि त्यस्तै भयो। यस्तो देखिन्छ कि हाम्रो चालको लागि केहि 'ग्लिच' राखियो तुरुन्तै सेवा हाम्रो DSL र फोन लाइनहरूमा रोकिन्छ। हामीले अर्को डेढ दिन फोनहरू हरायौं। अब म अलिकति दु: खी भइरहेको थियो।
AT&T ले एक उत्कृष्ट सेवा टेक्नीशियनलाई पठाईयो जसले अर्को बाहिरी केटासँग DSL लाइन फिर्ता लिन काम गरे। जब फोनहरू अन्ततः DSL मा फर्किए पछि फेरि बाहिर निस्के। अर्को दुई घण्टा बित्छ तर प्याट्रिक प्रबल हुन्छ र हामीलाई १००% मा फिर्ता जान्छ।
आज बिहान सम्म।
आज बिहान काममा हिंड्दा, मलाई भनिन्छ DSL फेरि तल छ। कसैलाई पनि कल गर्न आवश्यक छैन, हैन? केही दम्पतीको अफिसमा स्प्रिन्ट कार्ड थियो र हामी नयाँ अफिसमा पुग्न नसक्दासम्म उनीहरू हाम्रो मुटुको धड्कन थिए (जहाँ नेटवर्क पहिले नै थियो।)
फोन लाइनहरु तल तल छन् ... प्रकारको। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई कल गर्नुभयो भने, तिनीहरू घण्टी लगाउँदछन् र घण्टी बन्छन्। मैले सन्देशहरू नयाँ फोन नम्बरका साथ सम्झें? त्यो अझै काम गरिरहेको छैन। त्यसोभए अब हामीसँग कुनै फोन छैन र कुनै DSL छैन। म फेरि ओछ्यानमा जान चाहन्छु।
यसको सट्टामा, हामीले हाम्रा सबै सामग्रीहरू सार्यौं र मैले PBX ​​प्रणालीलाई नयाँ स्थानमा बदले। केही घण्टा पछि, हाम्रो AT&T मर्मतकर्ता देखाउँदछ। १ 15 मिनेट पछि, उनी भन्छन्:
लाइनमा केहि गलत छ त्यसैले तिनीहरू के हुँदैछ भनेर हेर्नको लागि "केबल" रिपेर्मन लिनु पर्छ। उहाँ भोली आउनुहुन्छ मलाई भनिएको छ। यस बिन्दुमा, मेरो सीईओ मलाई भ्रमण गर्दछन् र चालमा जाँच गर्दछन्। धन्यबाद, उहाँ कोठामा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई समातिएको छ र एक व्यक्ति बाट अर्कोमा, अर्कोलाई अर्कोमा पठाउँदैछु। प्रत्येक ट्रान्जिसन मलाई प्रमाणको लागि सोधियो कि यो मेरो खाता हो (बिलमा अन्तिम time अंक) र समय - समयमा मलाई सेवा अर्डर नम्बरहरू सोधिएको छ (मसँग अहिले दुईवटा छन् ... एउटा चालको लागि, अर्को मर्मतको लागि) ।
मेरो मालिक सुन्छु जब म एटीएन्डटीको साथ हाम्रा हप्ताको कठिनाइहरूको कौशलतापूर्वक दोहोर्‍याउँछु - जुन हाम्रो ग्राहकहरू र सम्भावितहरूसँग गत हप्तामा कति बिक्री, कति व्यापार, र कति विश्वसनीयता हामीले गुमायौं भन्ने अभिव्यक्त गर्दै। म यस तथ्यमा अचम्म मा छु कि म चिच्याउन वा चिढ्न सक्दिन, मैले वर्णन गरे झैं - विस्तृत रूपमा - हप्ताको हप्ताको एटीएन्डटीले मलाई प्रदान गरेको छ। याद राख्नुहोस्, यो काममा मेरो तेस्रो हप्ता हो। 🙂
हामी दुबै आश्चर्यचकित छौं कि फोनमा एक व्यक्ति संग प्रत्येक छलफल समाप्त भयो, "के तपाईं आज तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको सेवाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ?"। "होईन" मेरो दोहोर्याइएको जवाफ हो।
के तपाईलाई शुभ समाचार चाहिएको छ वा नराम्रो समाचार?
मसँग अहिले एक वरिष्ठ टेक्नीशियन छ जो अहिले निर्माणमा छ र केबल समस्यामा काम गर्दैछ। उहाँ यहाँ केहि घण्टा को लागी आएको छ तर ऊ फोन लाइनहरु काम गरिरहेको छ। अवश्य पनि, हाम्रो PBX प्यानलको छेउमा जानको लागि १ 25 मिनेट १ minutes मिनेट हुन्छ (किन उनीहरूले they १०० / घण्टा मात्र बोल्दैनन्?)।
उनी भन्छन्, "के तपाईलाई शुभ समाचार चाहिएको छ वा नराम्रो समाचार?"
"शुभ समाचार, कृपया।", म जवाफ दिन्छु।
उसले विद्यमान भवन फोन तारका समस्याहरू फेला पार्छ र मलाई भन्छ, "त्यहाँ कुनै राम्रो समाचार छैन, लाइनहरू प्राप्त गर्ने कुनै उपाय छैन।"
म उत्तरको लागि कुनै लिने छैन।
हामीसँग १०० CAT100 केबलहरू छन् जुन डाटा केन्द्र र हाम्रो अफिसको बीचमा यात्रा गरिरहेका छन् त्यसैले म केहि प्यानेलहरू लिन्छु र उनीहरू कहाँ जान्छन् भनेर पत्ता लगाउँदछन्। त्यहाँ फायरवालमा एउटा केबल-मार्ग छ र यस बीच र ड्रप छत र फोन कोठा भित्र आउने कोठा। यो सिधा to० देखि foot० फिट रेखा हो। ऊ जान्छ र आफ्नो ट्रकबाट केबुल निकाल्छ र लगभग १०० फिट केबल दौड्यो।
यो P पीएम हो र हामीसँग अब भवनमा लाइभ फोन लाइनहरू छन्। म केवल टेक्निशियनको लागि उनको अन्तिम कार्य पूरा हुने पर्खाइमा छु - यसले मलाई सम्पूर्ण ब्लग पोष्ट लेख्न समय प्रदान गर्दछ। फोन लाइनहरु अब PBX प्रणाली को लागी तार गरीएको छ।
भोलि मैले गर्नुपर्ने भनेको केहि थप केबल र आरजे ११ ज्याक लिनु छ र म नयाँ ह्वाइटबाट पीबीएक्स प्रणालीमा हप बनाउन सक्छु ताकि म we्गलबार हामीसँग फोनहरू छन्।
त्यो हो ...
त्यो हो, हामी सार्न पछि। म भोलि बिहान सबेरै अफिसको चाल देखाउँछु। टोलीले पहिले नै सबै थोक प्याक गरेको छ, त्यसैले मूभरर्सले यसलाई भोलि मात्र सार्न आवश्यक पर्दछ। यो अझै पनी लामो दिन हुनेछ भन्नेमा म निश्चित छु।
म निश्चित गर्दछु कि हामी फोनको साथ १००% माथि छौं व्यापारको अन्त्य सम्म। आज मैले हाम्रो नेटवर्कमा, सुरक्षित वायरलेस, एक नेटवर्क प्रिन्टर, एक हबमा राखें, र केन्द्रीय प्याच प्यानलबाट सबै क्यूबिकुलहरू तार गरे। प्याच प्यानलबाट हाम्रो PBX प्रणालीमा सबै फोन लाइनहरू पनि मैले तार गरे। एटी एन्ड टी को अलावा, मैले कामको एक टन लिएँ।
म Tuesday्गलबारमा, म फोनमा एटीएन्डटीसँग कुराकानी गर्नेछु किन उनीहरूसँग हाम्रो व्यापार राख्नु पर्छ भनेर। केवल चीजहरू मैले तिनीहरूलाई मा सक्षम हुन पाए।
बिक्री बन्द गर्दै।
सेवा बन्द गर्दै।
तपाईंले वितरण गर्न नसक्नेको बिक्री रोक्नुहोस्, AT&T। कत्ति गाह्रो हुने थियो:
हाम्रो DSL विच्छेदन अघि पुष्टि गर्न कल?
हाम्रो फोन लाइनहरु विच्छेद गर्नु अघि पुष्टि गर्न कल गर्नुहोस्?
हाम्रो DSL विच्छेदन अघि पुष्टि गर्न कल (दोस्रो पटक)?
हाम्रो DSL (तेस्रो पटक) विच्छेदन गर्नु अघि पुष्टि गर्न कल गर्नुहोस्?
एक अनुभवी प्राविधिकले मेरो साथ नयाँ भवनको दायरा सार्न र कार्य आदेश मार्फत हिड्ने भन्दा पहिले मसँग भेट गरे? मैले खुशीका साथ प्रति १ minutes मिनेट प्रति $ २ / / घण्टा तिर्ने थिए!
यो 9PM हो। टेक गरेको छ र उसले आफ्नो बट बन्द गरीयो म निश्चित थिए कि म खुशी थिए। म उनीसँग खुसी छु, उसको कम्पनीको लागि पनि नराम्रो छ, यद्यपि। म घर जादैछु। म यहाँ चालकहरूको लागि ११ घण्टामा फर्किनु पर्छ र मसँग minute 11 मिनेट ड्राइभ घर छ।
मलाई लाग्छ कि किन उनीहरूले यसलाई "लेबर डे वीकएन्ड" भन्छन्!
अद्यावधिक / / १: १-9०० नम्बर अझै पुरानो फोन नम्बर डायल गर्दैछ र सन्देश अवरोधन बन्द गरिएको थिएन। १-1०० समुहसँग कुरा गरिसकेपछि, यो रेखा पुन: निर्देशित गर्नको लागि कसैले पनि कार्य आदेश राख्दैन जस्तो देखिन्छ। Different बिभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुरा गरिसकेपछि, मैले एउटा ईन्जिनियर भेट्टाँ जसले अर्डर मितिलाई पास गर्दै (पहिलो व्यापार दिन, त्यसैले यो अर्को म be्गलबार हुने थियो) आज १-1०० नम्बर काम गरिरहेको छ।
सन्देश अवरोधन खोल्नु भन्दा पहिले २ 24 घण्टा देखिन्छ। उनीले पठाउनु पर्छ फैक्स यसलाई खोल्नको लागि। सास
अद्यावधिक / / २: हिजोआज हामी टेलिफोनीको विजार्डमा गल्तीले जडित भएको हुनुपर्दछ। म विश्वास गर्दछु कि उनको नाम डेमेट्रिया थियो - तर उनले अरू सबै काम गरिरहेकी छिन्! उसले अर्को प्रतिनिधिसँग गरेको कुराकानीको पनि म साक्षी थिएँ जहाँ उसले १-9०० काम नम्बरमा काम गर्न शुरू गरेकी थिई उसले अर्को मंगलवार प्रस्तुत गरेकी थिइन। उनी हामीसँग सबै दिउँसो अडी थिइन् जबसम्म उनले सन्देश फर्वार्डिंग गरी सकेनन्। जसको डिमेटरिया हो - एटी एंड टीले उनलाई "ग्राहकलाई कसरी व्यवहार गर्ने" वर्गको जिम्मा लगाउनु पर्छ!
धन्यवाद हामी हामी हुन र म Tuesday्गलबार को लागी तयार छौं!
अगस्ट,, २०१ 31 2007:२१ अपराह्न
ओह म्यान! कुनै सामान्य व्यवसायले यस विशालताको सेवा असफलता हटाउन सबै स्टपहरू बाहिर निकाल्छ।
संग समस्या धेरै एटी एन्ड टी जस्ता धेरै धेरै ठूला कम्पनीहरूले उनीहरूको कुकी कटर प्रक्रियाहरूमा ठीकसँग फिट नहुने कुनै कुराको समायोजन गर्न यो उनीहरूको लायक हुँदैन भनेर अनुमान लगाउँछन्। एक स्थिति छ कि तिनीहरूको अपेक्षित सामान्य भन्दा बाहिर झर्छ र तपाईं होज हुनुहुन्छ।
म अनुमान लगाउँछ कि तिनीहरू ठूलो संख्यामा छन् जुन तपाईंको व्यवसायले केही फरक पार्दैन। म एक्लो प्राविधिक को लागी खराब लाग्छ उनि तपाइँको ठाउँमा पठाए। म शर्त लगाइरहेको छु उनीहरूले उनीलाई भनेनन कि उनी शुक्रबार ढिलो काम गर्न चाहन्छन् छुट्टीको साताको सप्ताह भन्दा पहिले।
म तपाईंसँग छु, क्रिस। सेवा प्रविधि जसले आज रात मलाई अप्ठ्यारोमा राख्यो एक कामको हेक गर्‍यो र वास्तवमै राम्रो मान्छे थियो। म पनि खुसी छु उसले पहिलो टेक्नीशियन जमानी भन्दा पनि मुद्दा सुल्झाउन को लागी समय लिए।
मा बेल फेरि फेरि ...। मैले कहिले पनि हैन, कहिले पनि DSL सेवा को बारे मा एक राम्रो शब्द सुनेको छ। टेक्नोलोजिकल दृष्टिकोणबाट होईन, सर्किicing परिप्रेक्ष्यबाट होईन। म सँधै एक केबल सेवा केटासँग छु, मेरो वीओआईपी फोन जडान सहित। अहिले सम्म कुनै समस्या छैन। र म पक्का छु कि त्यो ध्वनि वायरिंग प्रणालीको श्रद्धांजलि हो - एउटा तामाको तार, सबै चीजको लागि एक स्रोत। अवश्य पनि, म एक पावर आउटेज ... हे!
विडम्बनाको कुरा, मसँग एटीएन्डटीको घरमा डीएसएल छ र यो साढे २ बर्ष देखि ठोस रहेको छ। म खुशी छु कि मैले कहिले पनि सेवामा परिवर्तनको लागि बोलाएको छैन, यद्यपि!
सेप्टेम्बर 1, 2007 मा 3: 45 AM
त्यो शकिंग र स्क्यार हो। के तपाई कुनै क्षतिपूर्तिको माग गर्न लाग्नुहुन्छ? म साच्चिकै आशा गर्दछु कि यसले केहि सभ्य कभरेज पाउँदछ र कसैलाई एटीएन्डटीमा यो हेर्नुहोस्।
आशा छ तपाईको बाँकी चालसँग राम्रो भाग्य छ।
सेप्टेम्बर 1, 2007 मा 6: 28 AM
कस्तो भद्रगोल। कुनै प्रकारको सर्वव्यापी वायरलेस पहुँच राम्रो देखिन्छ, हैन? जे होस् त्यो असक्षमहरूलाई गलत समयमा बन्द गर्नबाट रोक्दैन।
माफ गर्नुहोस् तपाईंले लामो - लूओong्ग - सप्ताहन्तको लागि यस्तो भयानक सुरुवात गर्नुभयो।
मैले आज एक / / १ अपडेट थपें।
यसले पूरा नयाँ स्तरमा "नयाँ व्यक्तिले फोहोर काम पाउँदछ"! आशा छ हामी तपाईलाई भोलि पनि देख्न सक्छौं!
केटी र म अझै त्यहाँ हुनुको योजना गर्दैछौं।
एटीएन्डटीमा केही नामहीन सुपरहीरोले हामीलाई आज दिउँसो आफ्ना मुद्दाहरूको अन्तिम समाधान गर्न मद्दत गर्‍यो। उनले account वा hours घण्टा सिधा हाम्रो खातामा काम गरेको हुनुपर्छ। एक बिन्दुमा, उनले फोनमा अर्को व्यक्तिमा कन्फरेन्स गरिन् र उनीहरूलाई वर्क अर्डर लेख्न भनिन् र हामी फोनमा हुँदा उनले यो काम पूरा गरिन्। मलाई थाहा छैन उनी को हुन्, तर म अत्यन्त खुशी छु कि उनले फोन उठाउँछिन्!
ये! आशा छ कि उनी अतिरिक्त तलब छुट्टीको छुट्टीमा हुने छन्। र वजन कम गर्न जारीमा कgra्ग्रेट्स!
सेप्टेम्बर १,, २०११ 2::2007० अपराह्न
हे डग खुशी छ यो सबै को लागी सबै डरलाग्दो समस्याहरु पछि काम। म पक्का छु कि हामी सबैले भन्नका लागि हाम्रो भयावह कथाहरू छन् तर तपाईको म धेरै सुनेको छु र यसमा संलग्न भएको छु! यहाँबाट राम्रो भाग्य छ।